डिम्याट खाताको संख्या २९ लाख पुग्यो, एक सातामै थपिए एक लाख बढि ? - नेपालबहस
डिम्याट खाताको संख्या २९ लाख पुग्यो, एक सातामै थपिए एक लाख बढि ?
| १३:०२:१७ मा प्रकाशित
७ फागुन, काठमाडौं । पछिल्लो समय डिम्याट खाता खोल्नेको संख्यामा उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि देखिएकाे छ । पछिल्लो एक सातामा डिम्याट खोल्नेको संख्या २९ लाख नाघेको छ ।
पछिल्लो एक सातामा एक लाख बढिले डिम्याट खाता खोलेका छन् । शेयरबजारमा निरन्तर सुधार आएपछि सार्वजनिक निष्काशनमा समेत सर्व साधारणको सहभागिता उच्च दरमा बढेको छ ।
ब्रोकर कार्यालय देखि बैंकहरुमा डिम्याट खाता खोल्नेको लाइनले पनि शेयरबजारमा लगानीकर्ताको सहभागिता बढेको हो ।
साधारण शेयरमा आवेदन दिन देखि दोस्रो बजारमा कारोबार गर्नका लागि डिम्याट खाता अनिवार्य हुनुपर्छ । नेपाल रिइन्स्योन्स कम्पनीको साधारण शेयर निष्काशन पछि पनि आम सर्वसाधारणमा शेयर सम्बन्धी जानकारी तिब्र फैलिरहेको छ ।
नेपाल रिइन्स्योन्सको साधारण शेयरमा आवेदन दिएका लगानीकर्ता सबैले शेयर पाए । दोस्रो बजारमा पनि रिइन्स्योरेन्सको प्रतिकित्ता शेयर मूल्य १८ सय रुपैयाँसम्म पुगेको थियो ।
त्यसले गर्दा पनि सर्वसाधारणलाई शेयर बजारमा आकर्षित गरको हो । पछिल्लो समयमा परिवारको एक सदस्यलाई शेयर परेको खण्डमा सम्पूर्ण परिवारका सदस्यको नामबाट शेयर आवेदन दिनका लागि पनि डिम्याट खाता खोल्ने क्रम बढेको हो ।
जनरल ईन्स्योरेन्सका संचालक दीपेन्द्र अग्रवाल निलम्बित, सम्पति शुद्धीकरणले पनि थाल्यो अनुसन्धान ५० मिनेट पहिले
संक्रमण बढेसँगै यतीकाे स्वास्थ्य मापदण्डमा कडाई ३ मिनेट पहिले
नेप्से आज दोहोरो अङ्कले ओरालो ८ मिनेट पहिले
त्रिकोणात्मक टी–२० सिरिज : नेदरल्याण्डस्द्वारा मलेशिया पराजित १३ मिनेट पहिले
बिहानैदेखि पवित्र कालीगण्डमा स्नान गर्ने भक्तजनको घुइँचो ४ दिन पहिले
हतौडा प्रहारबाट १५ वर्षीय बालकको हत्या, एकजना पक्राउ २४ घण्टा पहिले
एकल महिला र सुत्केरीलाई लत्ताकपडा वितरण २ हप्ता पहिले
टुँडिखेलमा एकहप्ते योग शिविर हुने, तपाई पनि जाने ? २ वर्ष पहिले
चीनमा कोरोना पीडित थप ५२ जनाको मृत्यु १ वर्ष पहिले